I-Semalt Yabelana Ngezindlela Zokucindezela Ukubhekana Nokuhlaselwa Ukuhlaselwa
Yonke indlela ye-e-commerce idinga izinga elithile lokuphepha. Kumnikazi wewebhusayithi,Ukuhlala kude nabaqashi kungaba esinye sezici ezibaluleke kakhulu emsebenzini wakho. Ezimweni eziningi, izingosi ezihlosiwe ezibhekiswe kuzocontrol panel panel kanye nedatha efanele evela kumawebhusayithi e-company. Lolu lwazi lungabandakanya ulwazi olubalulekile lwamakhasimende kanyeidatha yekhadi lesikweletu.
Ukusekela iwebhusayithi yakho kungaba into enhle ukuyenza. Ungahlala uthola ukubuyauma kwenzeka yonke inqubo ifika phansi. Ukuphepha kolwazi lakho kwamakhasimende kusezandleni zakho njengewebhusayithi yenkampaniumphathi. Ngenxa yalokho, uvumela wonke umsebenzi we-Search Engine Optimization kanye nezinqubo ukuthi zifinyelele phansi.
uJack Miller, iMenenja yeMpumelelo yabaMakhasimende aphezulu Semalt ,ichaza ezinye zezindlela zokuvikela iwebhusayithi yakho kubaduni:
Sebenzisa amaphasiwedi aphephile.
Enye yezindlela ezilula ukuqinisekisa ukuthi ukuphepha kwesayithi lakho kungukusebenzisaamaphasiwedi aphephile. Njalo i-hacker iqala ngomsebenzi wokuzama ukuqagela iphasiwedi. Amaphasiwedi avamile afana ne-12345 awavikelekile futhi angaba ngabanyeukuqagela lula. Kubuye kuhlakaniphe ukungasebenzisi amagama umuntu angaqagela. Noma ubani othola iwebhusayithi yakho kudingeka abe nephasiwedi ephephile. AIphasiwedi ebuthakathaka ikwandisa ubungozi bewebhusayithi yakho kubaduni.
Amanye amawebusayithi angabhalisiwe ayengozini kwezinye izinto ezingabizi. Uma ukuklamaisayithi lakho, kubalulekile ukuqasha isakhiwo sekhodi esingavumele ukufaka ukungena emaphethelweni ahlukene. Isibonelo esihle amanye amawebhusayithi e-PHP.Lawa mawebhusayithi aphephile kakhulu kangangokuthi cishe noma ubani onedivayisi ye-Linux ngokuqinisekile angafika ku-database. Ngaphezu kwalokho, amathuluzi alula njengoHavij nomaI-Framework Execution Framework (BeeF) ingakwazi ukufinyelela ku-database ngokude ngaphandle kwesidingo sokusebenzisa iphasiwedi yomlawuli.
Ukusebenzisa ukuvikelwa kokungqimba kwamanzi kuma-URL kungalondoloza abasebenzisi bakho ngokumelene nokunyeimizamo elula kakhulu ye-hack. I-HTTPS ingasiza umuntu ukuba abe nokuphepha nokuvikeleka lapho ehlinzeka ngolwazi lomuntu siqu oluyimfihlo kuwebhusayithi. Lokhuuhlobo lokulondeka alinakwenzeka namanye ama-protocols wokubamba nge-intanethi. Kubalulekile ukugqugquzela izivakashi ngalolu hlobo lokuphepha.
Sebenzisa ama-plugin wokuphepha.
Uma ubamba iwebhusayithi futhi wenza i-SEO ngokuzenzakalela, kunezinye izinhlelo ezikwazi ukukwenzauvikele ukusebenza kwewebhusayithi yakho. Ngokwesibonelo, abanye abantu bangasebenzisa ithuluzi le-BulletProof Security noma i-Themes Security. Lawa mathuluzi angakwazihlela noma yikuphi ukukhathazeka okukhona kunoma yimuphi isikhulumi noma isikhombimsebenzisi sokuhlela uhlelo lokusebenza.
Ukuphepha kwewebhusayithi kanye namakhasimende ayo bathembele ekutheni angakwazi ukuyeka kudeabaduni. Abaqaphi bangase bahlose amasayithi ngezici ezihlukahlukene. Okokuqala, bangase babe yinkampani yemncintiswano ezama ukuletha isayithi lakhophansi. Kwezinye izimo, bangase babe abantu abanenhloso yabo engaqondakali kodwa banethemba lokuzulazula ngendlela inkampani yakho esebenza ngayo.Ngenxa yalokho, kungaba yisici esibalulekile sokugwema abaduni, ikakhulukazi kusuka endaweni yokubuka kwewebhusayithi. Le mhlahlandlela ingakusiza ukufezekisalokhu njengoba wenza ukuphepha kwesayithi lakho kube namandla. Ngaphezu kwalokho, amaklayenti akho angahlala evikelekile.